I-Airbnb iyigcina isikhathi eside kangakanani imininingwane yomuntu siqu? - Isikhungo Sosizo se-Airbnb
I-Airbnb iyigcina isikhathi eside kangakanani imininingwane yomuntu siqu?
Ngokujwayelekile sigcina i-data ehlobene ne-akhawunti yakho oyisebenzisayo uma nje usenayo i-akhawunti ye-Airbnb. Uma uvala i-akhawunti yakho ye-Airbnb, sizosula idata yakho yomuntu siqu njengoba kuchazwe kwi Umthetho wemfihlo.
Kukhona imininingwane ethile esingayigcina isikhathi esijana njengoba kusho noma kuvunyelwa umthetho. Isibonelo, Silindeleke ukuthi sigcine imininingwane ethile ehlobene nokukhokhwa kwezimali iminyaka eminingana. Noma, singagcina imininingwane ethile yokucubungula ukukhwabanisa noma izizathu zokuphepha.